#LAND -Ikhosi yoMhlaba kaGoogle-ukusuka ekuqaleni-iGeofumadas
I-#LAND - Ikhosi yeGoogle yoMhlaba - ukusuka ekuqaleni
NgoJulayi, 2019 Izifundo ze-AulaGEO
Yiba yingcali yokwenyani yeGoogle Earth Pro kwaye uthathe ithuba lokuba le nkqubo ngoku mahala.
Umntu ngamnye, iingcali, ootitshala, izifundiswa, abafundi, njl. Wonke umntu unokusebenzisa le software kwaye ayisebenzise kwicandelo lakhe elihambelanayo.
I-Google Earth isoftware evumela ukujonga ukujonga ukubonwa kwesatellite, kodwa nokusebenzisa 'umbono wesitrato', Isijikelezi-langa sethu uMhlaba. Ngoku inguqulelo ngalinye ngokupheleleyo simahla kwaye ivumela ukufikelela kuzo zonke izinto eziphambili.
Nokuba uyi- kanye ukuba ufuna 'ukuhamba' kwilizwe lonke, ngokungathi u profesional oya kuyisebenzisa ukubeka ulwazi kunye nokuvelisa iimephu, le khosi iya kuba luncedo.
Le nkqubo ikwisixhobo esonwabisayo se ilizwe lemfundo, kuba kunokwenzeka ukubonelela ngezifundo ngemisebenzi enxulunyaniswe kuGoogle Earth (umzekelo, jonga ukwakheka komhlaba, yenza ubuchwephesha behlabathi, imbali, njl njl.)
Isifundo sakhiwe ngaphakathi Amacandelo e-4:
Intshayelelo: Bayakufunda ukukhangela iindawo, bangene ngokudibeneyo kwaye balawule amacandelo ahlukeneyo obume beGoogle Earth Pro.
Yongeza ulwaziUya kufunda ukongeza ii-placemark, imigca kunye neepuzzle. Layisha ulwazi ngeendlela ezahlukeneyo kunye nokungenisa idatha kwi-GPS.
Ulwazi lwangaphandleUya kufunda ukucwangcisa iithayile zakho kunye nokwenza iifayile ze-kmz. Uya kuthumela imifanekiso uze wenze ukhenketho.
Iinketho eziphambiliUya kufunda ukusebenzisa irula kunye nokubala iindawo kunye neeparamitha. Uya kongeza iifoto kwaye uyazi imbali yemifanekiso.
Icandelo ngalinye lihamba kunye noluhlu lwe ukuzivocavoca kunye nemibuzo yokuziqhelanisa nezixhobo ezibonakalayo, kunye namaxwebhu kwi PDF Iyakhutshelwa
Lawula iGoogle Earth njengengcali.
Yenza iindawo ezinokubeka uphawu, iilayini kunye neepuzzle.
Ngenisa ulwazi oluvela kwezinye iinkqubo zolwazi lwendawo.
Thumela imifanekiso yesisombululo esiphezulu.
Dala uthumelo ngaphandle.
Yombelela imifanekiso kwaye ujonge nembali yomfanekiso
Uya kudinga isoftware kaGoogle Earth Pro. Siza kufundisa ngenkqubo.
Inqanaba elisisiseko kwiikhompyuter kunye nokusebenzisa imouse kuya kwanela.
Nabani na ofuna ukwazi iindawo ezintsha kwiplanethi.
Ootitshala abafuna ukusebenzisa indlela entsha yokufundisa. Ukufundisa iJografi kubonakala kucacile, kodwa unokwenza kwakhona imisebenzi kwiklasi yezembali umzekelo, ukufunda izakhiwo zase-Egypt.
Iingcali ezivela kuwo nawuphi na umhlaba ezifuna ukuvelisa ulwazi ngokobuchwephesha ngaphandle kobunzima bokusebenzisa iNkqubo yeNgcaciso yeJografi.
Izifundo zeSensor ekude Izifundo ze-GIS
Post edlulileyo«Ngaphambilini #GIS -Imodeli kunye nezifundo zohlalutyo lwezikhukula- zisebenzisa i-HEC-RAS kunye neArcGIS
Post Next #LANDELWA - Ikhosi ye-3D ye-Civil kwimisebenzi yaseburhulumenteni- Inqanaba loku-1Okulandelayo »